Martech Zone: Tongasoa eto amin'ny Publication martech vaovao-ko! | Martech Zone
Zoma Janoary 6, 2017 Alatsinainy, Novambra 2, 2020 Douglas Karr
Herintaona izay vao nanamboatra ny tranokalanay WordPress farany aho. Na dia tiako aza ny layout, nanana plugins sy namboarina aho mba hampandehanana azy io araka ny nitiavako azy koa. Miaraka amin'ny WordPress, izay afaka manomboka manonona ny loza avy amin'ny fomba fijerin'ny fampisehoana ary hitako ny triatra tao amin'ny fototra.
Noho izany, niroso tamin'ny fikarohana endrika izay afaka mampiditra fampisehoana roa lehibe aho ary koa mamaly ny efijery finday - sady mamporisika ny mpamaky anay hifikitra hahita ny vaovao tadiavin'izy ireo.
Namolavola fomba amam-panao aho WordPress lohahevitry ny zaza amin'ny lohahevitra fototra sy tohana tsara novidina tamin'ny Themeforest, avy eo nanampy fiasa lehibe nilainay mba hanosehana ny atiny amin'ny fampiharana finday anay ary koa hampiarahina amin'ny alàlan'ny serivisy ho an'ny serivisy manokana izay tianay hizarana ny atiny.
Araka ny efa tsikaritrareo dia namerina nanoratra avy ao amin'ny The Marketing Technology Blog ho Martech Zone, mampiasa ny teny voafaritra manokana momba ny varotra sy ny teknolojia marketing… MarTech. Nandeha teny amoron-dalana ilay teny hoe bilaogy raha nanohy namoaka fikarohana sy lahatsoratra mifantoka amin'ny fanampiana ireo matihanina amin'ny fikarohana, fikarohana ary fahalalana momba ny teknolojia fivarotana sy marketing aho.
Manana sehatra tsotra novidiko koa aho marketing.technology izay mandroso eto (azontsika atao ny mamindra ny zava-drehetra mankany amin'io sehatra io indray mandeha .dia malaza kokoa ny domains teknolojia).
Izay ataon'ny hafa Martech Zone Manana?
Resources - Manana komprehensif aho izao Martech Resource faritra, izay misy hetsika, whitepapers, ary loharano hafa.
Podcast - Manohy manadihady ireo mpitarika lozisialy, mpampiofana, mpanoratra ary mpandahateny avy amin'ny indostrian'ny varotra sy ny marketing aho amin'ny Martech Zone Interviews.
Inona no tanjona faratampony ho an'i Martech?
Mety efa folo taona lasa aho, nefa mijery hatrany ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa mpikambana, mpamatsy, vondrom-piarahamonina, loharanom-pahalalana ary fanamarinana… raha manana zavatra manampy ny lanjan'ilay famoahana ahy ianao dia ampahafantaro aho!
Tags: bilaogyjenn lisakbilaogy teknolojia marketingMartechbilaogy martechvondrom-piarahamonina martechivotoerana fianarana martechfotoanafoto-kevitraWordpress theme
Fomba 13 anomezana vola an-tserasera ny atiny